प्रत्येक युवतीले आफ्नो हुनेवाला पार्टनरमा खोज्ने ६ गुण - Khabar Break | Khabar Break
मकवानपुरका पत्रकार अधिकारी सम्मानित
सामुदायिक क्याम्पसका समस्याबारे मुख्यमन्त्रीसंग अन्तरक्रिया
एक महिनाभित्र बङ्गलादेशबाट युरिया मल आउने
अध्यक्षद्वय र महासचिवले १० दिनभित्र एकताको कार्ययोजना बनाउने
देशभर १,३५६ संक्रमित थपिए, ८२३ जना डिस्चार्ज
प्रत्येक युवतीले आफ्नो हुनेवाला पार्टनरमा खोज्ने ६ गुण
मानिसको चाहना असिमित हुन्छ । कुनै एक वस्तुको खरिद गर्दा पनि त्यसको गुण अवगुण बुझेर सामान तौलेर सहि लागे मात्र लिने गरिन्छ ।
यस्तोमा आफ्नो पार्टनरमा हुने गुणका बारेमा हरेक मानिस सजग हुने गर्दछन् । उसको ब्यक्तित्व, क्षमता र विगतका साथै मानिसले उसमा केहि विशेष गुणहरु खोज्ने गर्दछन् ।
अझ यस मामलामा युवतीहरु निकै सजग हुन्छन् । युवती आफ्नो पार्टनरमा निम्न ६ गुण खोज्ने गर्दछन् ।
१. स्मार्ट तथा गुड लुकिङ
झट्ट हेर्दा जो कोहिलाई गुड लुकिङ र स्मार्ट मानिस नै मन पर्छ । तसर्थ हरेक युवती आफ्नो हुनेवाला पार्टनर आकर्षक र स्मार्ट होस् भन्ने चाहन्छन् ।
२. केयरिङ गर्ने
कुनै पनि युवतीले आफ्नो पार्टनरमा आफ्नो पिताको छवि होस् भन्ने चाहान्छन् । पिताको छवि यस कारण कि उनिहरु आफ्नो सन्तानको निकै धेरै केयर गर्दछन् ।
उनले खाए नखाएको वा बिरामी भएको सबैमा पिताको चासो रहन्छ। तसर्थ युवतीले आफ्नो पार्टनरमा केयरिङ गर्ने स्वभाव भए नभएको हेर्ने गर्दछन् ।
३. आर्थिक सबल
धनी केटा युवतीको रोजाइमा पर्छ भन्ने आरोप छ । तर अधिकाशं अवस्थामा यो सत्य नै हो । किनकी अभावमा भएकासंग जीवन बिताउनु भन्दा शुरुवातमा आर्थिक सबल भएको पार्टनरलाई युवतीले महत्व दिन्छन् ।
जसका कारण विवाह पश्चात आर्थिक रुपले कुनै असुरक्षा झेल्न नपरोस् भन्ने उनीहरुको चाहना हुन्छ ।
४. राम्रो रोजगार
हरेक मानिसको चाहना हुन्छ, कुनै राम्रो जागिर खाने । अझ यस्तोमा कोहि आफन्तले राम्रो जागिर खाएको छ भने हामी त्यसलाई उदाहरणीय बनाउँछौ ।
यस्तोमा युवतीहरु आफ्नो पार्टनरले राम्रो जागिर खाएको होस् भन्ने चाहना राख्दछन्।
राम्रो जागिर भएमा कमाई, तथा लाइफस्टाइल राम्रो हुने उनीहरुको बुझाइ रहने गरेको छ ।
अक्सर महिलालाई आफ्नो पार्टनर रोमान्टिक होस् भन्ने चाहाना हुन्छ। गम्भीर, चिन्तित वा भावुक पार्टनर युवतीले रुचाउँदैनन् । उनीहरु पार्टनरले घरी घरी ख्यालठट्टा गरोस्, रमाइलो माहौल बनाओस्, सरप्राइज दिओस् भन्ने चाहना हुन्छ ।
६. परिवारमा समय दिने
प्राय युवतीहरु आफ्नो पार्टनरले आफुलाई प्रशस्त समय दिउन् भन्ने चाहना राख्दछन् । कामकाजी पुरुषहरु कार्यालयको काम वा करियर बनाउने नाममा घर परिवारलाई समय दिन सकिरहेका हुँदैनन् । तर यस्ता पुरुषलाई युवतीले खासै मन पराउँदैनन् । समझदार-
हरेक युवती आफ्नो पार्टनरमा समझदारीको गुण होस् भन्ने चाहान्छन् । पार्टनर समझदार भएमा मात्र आफ्नो भावना बुझ्ने उनीहरुको तर्क रहने गरेको छ । साधारण बिषयमा पनि शंका गर्ने वा किचकिच गर्ने पुरुष युवतीको रोजाईमा पर्दैनन् ।
चीनमा अर्को रोगको प्रकोप, तीन हजार बढी व्यक्ति संक्रमित, रोग के हो ? कस्तो हो ?
ग्यास्ट्रिकको समस्याले सतायो ? झुक्किएर पनि नखानुस् यस्ता खानेकुरा
पर्समा यस्ता चिज राख्नुहोस्, कहिल्यै पैसाको अभाव हुँदैन (टिप्ससहित)
घरमा सुख-समृद्धि ल्याउन विहानै गरौं यी काम
बढी खान नहुने ७ पदार्थ: जसले क्यान्सरको जोखिम बढाउँछ
जब ४० करोड रुपैयाँ पर्ने दुर्लभ पुस्तकहरू घरमुनि भेटिए
बिहानै खाली पेटमा मनतातो पानी पिउनुका फाइदा
आइसोलेसन सेन्टर जान्छु भनि हिडेका युवक ‘गलफ्रेण्ड’सँग समातिए
यस्तो रोचक जोडि जसले गरे शव–बाकसमा बिहे
कोरोना महामारीमा ‘पोर्न’ व्यापार : मास्क र गाउन लगाएरै यौनसम्पर्क !
पहिरोमा पुरिएर गुल्मीमा दुई जनाको मृत्यु
गोपालदास पत्रकारिता पुरस्कार श्रेष्ठलाई
डा. केसीलाई प्रहरीले जबरजस्ती नियन्त्रणमा लिएर ट्रमा सेन्टर पुर्‍यायो